UCanzibe 21, 2018 admin
Philippines umzuzw inxusa ucela abachaphazelekayo crypto’ ingxelo imithetho
I Philippines 'Regulator market, i Securities and Exchange Commission, ungxamele igalelo ye crypto kunye blockchain “abachaphazelekayo” ukuncedisa ii-arhente zikarhulumente xa kubhalwa imigaqo efanelekileyo ukuba isithuba.
Sec Commissioner Ephyro Luis Amatong wathetha kwintlanganiso ye-Philippine Association of Digital Commerce and Industry amagunya, wathi:
"Urhulumente ufuna yokuqulela ingxaki ingekehli ekudaleni imithetho malunga cryptocurrency. Sifuna ukuzibandakanya bonke abachaphazelekayo ngokubuza ukuba impendulo yakho. Asifuni ban nantoni na ngenxa nje yokuba asiyiqondi into. Kungenxa yoko le nto impendulo yakho kunye nentsebenziswano yakho ibalulekile ukuze sikwazi ukuza kunye ulawulo olufanelekileyo malunga zorhwebo cryptocurrency. "
kungekudala Abezopolitiko Colorado kaThixo wayengayamkeli iminikelo crypto
Kungekudala Isimo Colorado kunike iikomiti ezopolitiko ukwamkela iminikelo cryptocurrency.
I-Ofisi kaNobhala eColorado of State lapapasha uyilo olutsha olusebenza yayo “Imithetho Ngokuphathelele Campaign and Finance Political” leyo okuqaphelekayo uquka icandelo elitsha eminikelweni cryptocurrency.
Ocetywayo States isikhokelo:
“Ikomiti inakho ukwamkela iminikelo cryptocurrency, phezulu ukuya kumyinge elamkelekileyo imali okanye lwemali umnikelo. Isixa igalelo elahliweyo lixabiso le cryptocurrency ngexesha lomnikelo. Ikomiti kufuneka ingxelo nayiphi na ingeniso okanye ilahleko emva igalelo namanye ingeniso okanye iirisithi.”
Rhashiya & Iran uyavuma ukuba cryptocurrencies zingasetyenziswa ukuphepha USWIFT kwakunye ukwayo
Irans intloko imicimbi yezoqoqosho, Mohammad Reza Purebrakhim, luchazwe ngokusebenzisa imali yedijithali njengoko kuthetha ukuba abaleke yempembelelo dollar njenge “indlela ethembisayo.”
Oku kwaxutyushwa kwintlanganiso kunye nentloko Russian Federation Committee Council on Economic Policy nguDmitry Mezentsev apho bobabini Russia, Iran wachaza crypto ngokuthi indawo kwinkqubo yentlawulo ozalwa USWIFT, ukusetyenziswa apho naye buthathaka naziphi ukwayo emali kunyanzeliswa kumazwe, ekwenzeni Russia ngentsebenziswano ne-Iran kule nzuzo ngokusebenzisa crypto.
CoinGate ukuze uqalise inkqubo yentlawulo Bitcoin Lightning Network
inkonzo iprosesa Payment CoinGate sele iqalile uvavanya Lightning Network.
Le nkampani kukuba nethemba lokuba kumqhubekekisi intlawulo yokuqala ukuba bayazamkela iintlawulo LN kwiimeko abaphila.
Cryptocurrencies ungatshintsha indlela yethu yokusebenza
Coincheck ufuna appr ...
Cryptocurrency omtsha ...
Post Next:Blockchain News 22.05.2018
UCanzibe 28, 2018 e 1:46 PM
UCanzibe 28, 2018 e 7:55 PM
Isilimela 21, 2018 e 8:41 PM